Ubuntu 18.04 ichave iine Livepatch basa mune yayo vhezheni yeDesktop | Linux Vakapindwa muropa
Gare gare mwedzi uno, inotevera vhezheni yeUbuntu LTS, Ubuntu 18.04 Bionic Beaver, ichaburitswa. Shanduro nyowani iyo isingangove neRutsigiro rurefu chete asi ichavewo yekutanga LTS vhezheni iyo ine Gnome 3 seye default desktop (shanduro dzekare dzaive neGnome 2 uye Kubatana).
Ubuntu 18.04 iri vhezheni inotipa zvinotishamisa kunyange kuziva beta vhezheni yacho. Chimwe chezvishamiso izvi kuiswa kweiyo LivePatch basa muDesktop vhezheni kana vhezheni yedesktop. Basa rinotipa chengetedzo yaive kusvika panguva iyoyo mune server vhezheni uye ikozvino ichave mune ese mavhezheni eUbuntu.
Livepatch ibasa rinotibvumidza kuti tivandudze iyo Ubuntu kernel tisingatangisezve komputa. Iri basa raiwanikwa kune iyo server vhezheni sezvo kuve nemaseva akavhurwa chimwe chinhu icho vazhinji masisitimu maneja anoshandisa Ubuntu anotarisa.
Zvino, LivePatch ichave ichiwanikwa paUbuntu Desktop, kuburikidza neSoftware uye Ongororo yekushandisa. Mune imwe yemathebhu iyo Livepatch sarudzo ichaonekwa asi kuti ishande tichada iyo Ubuntu One account.Uye apa ndipo apo Canonical inoramba ichichengetedza bhizinesi reichi chiitiko, sezvo ichingobvumidza anosvika matatu emakomputa akanyoreswa neiyo imwechete Ubuntu One account.Nemamwe mazwi, yega yega Ubuntu Akaundi ichagonesa Livepatch pane matatu Ubuntu michina. Kana iwe uchida mamwe makomputa, isu tinofanirwa kubhadhara kune iyo Inobatsira basa reCanonical Chirongwa, iko chaiko iko kuita.
Livepatch yakaunzwa mwedzi mishoma yapfuura uye kure nebhizinesi, chokwadi ndechekuti ndizvo rinonakidza basa nekuti rinotibvumidza isu kuvandudza iyo inoshanda sisitimu tisina kutema chero rakakosha basa senge kurodha pasi hombe faira kana rimwe basa rekugadzirisa. Ehezve, hazvikurudzirwe kusiya komputa yako maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva mazana matatu nemakumi matatu nemashanu pagore. Livepatch chinhu chakanakisa uye chinhu chitsva chevashandisi veUbuntu Desktop, asi chimwe chinhu chinondiudza kuti hachizove icho chitsva Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 18.04 ichave iine Livepatch basa mune yayo vhezheni yeDesktop
Carlos Villalta akadaro
Kwazisai, uye iyi distro haichapa dambudziko nelenovo latpop, iyo bios yapera
Ndine ldeapad 110 1
Pindura Carlos Villalta